Umgwebi welizwe lonke - uRabi uMichael Avraham
Umgwebi welizwe lonke
Iimpendulo > Udidi: Ukuziphatha > Umgwebi welizwe lonke
Unikezelo Ubuzwe kwiminyaka emi-3 eyadlulayo
URabhi uwuqonda njani umbuzo ka-Abraham othi ‘umgwebi wehlabathi lonke akayi kwenza okusesikweni’? Ngaba ukuziphatha kuyabophelela ngaphandle kwesisu? Yaye ukuba akunjalo, ukuba ukuziphatha kuyinto enyanzelekileyo ukulandela kuphela ukuthanda kukaThixo, yaye ngaphandle kwayo imbopheleleko yokuziphatha ayinantsingiselo, ‘unokubuzwa’ njani uThixo ngokuswela kwakhe ukuzithoba kwimilinganiselo yokuziphatha?
mikyab Abasebenzi Uphendulwe kwiminyaka emi-3 eyadlulayo
Yintoni ingxaki? Nokuba isimilo sibophelela kuphela kumandla kaThixo, uAbraham uyambuza malunga nokungangqinelani.
Umlamli wokugqibela Uphendulwe kwiminyaka emi-3 eyadlulayo
UAbraham akazi ukuba uthetha noThixo.
Uyaqonda ukuba uthetha nomntu onobuchule noze kwenza okusesikweni. Ngoko uzama ukukhohlisa ngokukhohlisa ngokudibanisa ukugqiba ukuba yintoni isenzo esifanelekileyo.
UDavid Siegel Uphendulwe kwiminyaka emi-3 eyadlulayo
Kuthetha ukuthini ukungazi ukuba uthetha noThixo?
Kwaye naba abantu abathathu bemi kuyo, omnye wabo yayinguH. kwaye wayengazi kuyo yonke loo nto
ITorah isixelela ukuba nguYehova kunye nentetho yakhe yangaphakathi kodwa uAbraham wayengazi.
Ngaba kunokwenzeka ukuba uThixo wavela kuYesu ??
Ukuba ufumana iinyoka ezihenda abantu kunye needonki ezithetha ngoko yonke into ingaba.